MOWDUUCYADA:7 Siyaabaha Sugar baabbi'iyaa Your Life Sex
Wax macno ah ma haddii aad tahay nin ama naag: sonkorta xad-dhaaf ah waa shar idiin ah, iyo waxa ay dishaa caafimaadka galmada. Sidaas darteed haddii aad ku baabbi'iyee badan oo sonkor ah ee sharaabka macaan iyo cabitaannada fudud oo fudud, Waxaa la joogaa waqtigii sare aad u jareen si ay u kordhiso noloshaada galmo ama inaad naftaada canaanato iyo xaaskaaga cowdo in tallaabo degdeg ah leeyihiin.
Sugar keena kacsi: Sugar saameeyaa helitaanka xabagta nitric iyo testosterone oo rag iyo dumarba u baahan tahay drive galmada iyo shaqada. Hel this xaq u: testosterone kor u gus iyo kacsiga clitoral labada, loo baahan yahay by nin galmada firfircoon iyo dumar, waayo, idinkoo Junub ah lagu farxi karo.
Sugar keena daal xad-dhaaf ah: Haddii aad ku hayaa habeen lagu farxi karo oo weli gubtay, tan oo sonkor ah ka fudud iyo cabitaannada fudud, markaas waa inaad sidoo kale amar laga yaabaa in aad noloshaada galmo bye-bye. Marka sonkorta dhiiggaagu ay soo baxdo, pancreases laftiisa overworks in ay qarsan insulin ku filan si ay ku jiraan sonkor iyo hortago dhaawaca maqaarka, iyo this qaadataa toll a on jidhka haddii jidhkaaga si joogto ah uu leeyahay in ay ka shaqeeyaan si ay u yareeyaan sonkorta dhiigga.
Sugar sababaha buurnida: sonkor fara badan oo dhiiga ku keenaysaa in cayilka kama dambaysta ah, haddii qofku aanu jimicsi si noqonaynin. Iyadoo cayilka yimaado nooca 2 diabetes kaas oo keena kacsi iyo sababa niyad galmada lammaanaha.
raadad Excess in qallayl siilka: Dhowr baaritaan ayaa loo baahan yahay in this xaqiijin, laakiin daraasaad yar ayaa laga helay xiriirka u dhexeeya sonkorta xad-dhaaf ah iyo qallayl siilka dumarka. Tani sida aad ogtahay sababaha galmada daran halkii lagu farxi galmada.
Sugar sababaha cudurrada bakteeriyada iyo khamiirka: Tani waa dhow la xiriira kor ku xusan, laakiin sonkor dhiig oo sareeya waxay abuurtaa jawi ku haboon bakteeriyada iyo khamiirka si ay u koraan in siilka, taasoo keentay in cudurka kaadi haysta ama kaadi mareenka taas oo iyana saamayn doonto hawlaha galmada dumarka.
Sugar dila hormoonnada jinsiga aad: Marka aad qabtid sonkor aad u badan in aad dhiig, waxay saamayn ku soo saarka ee endorphins, serotonin iyo dopamine ka mid ah hormoonada kale oo door ah oo hawlaha galmada caafimaad. heerka An aan joogto ahayn hoormoonada kuwaas oo burburisay doonaa Shukaansiga galmada, oo waxaad ka samaysaa uusleyda dhaleen ah in xaaska xiriir jecel.
Sugar keenaysaa in stress maskaxda iyo jidhka: sonkorta dhiigga ayaa fingered in goor wanaagsan heerka cortisol, taasoo keentay in stress maskaxda iyo jidhka taas oo iyana saamayn ku meersan galmada iyo jawaab. Si aad u raaxaysan waqti abaal la xaaskaaga, aad u baahan tahay inaad hoos u sonkorta oo arag sida taranka mahad dhaqaaqo this si ay uga caawiyaan shaqayn fiican ee u adeega baahida Shukaansiga aad.
Be the first to comment on "Bad News: 7 Siyaabaha Sugar baabbi'iyaa Your Life Sex"